क्याम्प नोउमा मेसीको अन्तिम खेल ! बार्सिलोनापछि के होला विकल्प ?
बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीको जारी सिजन व्यक्तिगतरुपमा उत्कृष्ट रहेपनि उपाधिका हिसाबमा उपलब्धिमूलक भने रहेन। सिजन शुरु हुनुअघि नै बार्सिलोना छोड्ने मनस्थिति बनाए पनि केही समयपछि स्पेनमै बस्ने निर्णय गरेका मेसीले न ला लिगाको उपाधि जिते न च्याम्पियन्स लिग नै।
जारी सिजन मेसीले ला लिगामा २९ गोल गरेका छन् भने च्याम्पियन्स लिगमा ५, कोपा डेल रेमा ३ गोल गरेका छन्। व्यक्तिगत हिसाबमा मेसीको यो प्रदर्शनलाई उत्कृष्ट नै मान्न सकिन्छ। तर, मेसीले यस सिजन कोपा डेलरेको उपाधि मात्र जितेका छन्। बार्सिलोनाले यस सिजनको च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको थियो भने घरेलु लिग ला लिगाको उपाधिबाट पनि लगभग बाहिरिसकेको छ।
हाल ला लिगाको अंक तालिकामा बार्सिलोना ३६ खेलबाट ७६ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा रहँदा ७८ अंकका साथ रियल मडिङड दोस्रो स्थानमा छ भने ८० अंकका साथ एथ्लेटिको मड्रिड शीर्षस्थानमा छ। बार्सिलोनाले आइतबार सेल्टा भिगोसँग घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति १०ः१५ बजे शुरु हुनेछ।
क्याम्प नोउमा मेसीको यो अन्तिम खेल हुने आशंका गरिएको छ। क्लब बार्सिलोनामा पुनः निराश बनेका मेसीले सिजन सकिएसँगै नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने सम्भावना प्रबल छ। क्लबको निरन्तर असफलताका कारण बार्सिलोनामा उदास देखिएका मेसी फ्रेन्च क्लब पिएसजी र इंग्लिस च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटी जाने चर्चा चलिरहेको छ।
फ्रेन्च क्लब पिएसजीले मेसीलाई भित्र्याउन आकर्षक अफर पनि गरिसकेको थियो। यस्तोमा मेसीको फुटबल भविष्य के होला त्यो मेसीको आफ्नै निर्णयले निर्धारण गर्छ। मेसीले यो सिजनको अन्त्यसँगै अर्को सिजन बार्सिलोनाको विकल्प खोजेमा उनका लागि सेल्टा भिगोविरुद्धको खेल बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा अन्तिम खेल हुनेछ।
#बार्सिलोना #फुटबल #ला_लिगा #लियोनल_मेसी
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २, २०७८ १३:०३